Nyanzvi dzezvehutano dziri kukurudzira kuti vanhu vavhenekwe kana vaine Covid-19, uye kuti varambe vachitevera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Bazi rezvehutano rakazivisa neChishanu kuti munhu mumwe chete akafa neCovid-19 kuBulawayo uye vanhu makumi mapfumbamwe nemumwe, kana kuti 91, vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mushure mekuvhenekwa kwevanhu mazana mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 907.
Pavanhu ava, makumi matatau nevapfumbamwe kana kuti 39, vari mudunhu reBulawayo kuchiti Mashonaland West iine vanhu makumi maviri, kana kuti 32, kuchitiwo gumi nevana vari kuMatabeleland South.
Harare ine vanhu vashanu, Manicaland vashanu, Mashonaland East vatatu, kuchitiwo matunhu eMasvingo neMatabeleland North aine vanhu vatatu vatatu.
Vanhu vose vakabatwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekumbobuda kunze kwenyika. Huwandu hwevanhu vakafa hwakakwira kusvika pamazana maviri nemakumi manomwe nevashanu, kana kuti 275.
Mwedzi uno chete dunhu reBulawayo rave nevanhu makumi maviri nevana vafa nechirwere ichi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakakwirawo kusvika pazviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe negumi nevana, kana kuti 9 714.
Vanhu vapona vakasvika pazviuru zvisere nemazana mana nemakumi manomwe kana kuti 8 470 mushure mekupona kwevamwe makumi manomwe nevatatu, kana kuti 73.
Johns Hopkins University yekuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu neimwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 61, 775 000 vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vanhu vanodarika miriyoni imwechete nemazana mana ezviuru vafa nacho.
MuAmerica, vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13 million vabatwa nechirwere ichi, uye vafa vachidarikawo zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvina, kana kuti 264 000.